ဒူဒူကြီး: ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ Sea Trial (၂)
sea trial schedule ကို (၅) ရက်ခရီးအတွက်ကြိုတင်ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ Classification Society အနေနဲ့ BV ဆိုတဲ့ Bureau Veritas အဖွဲ့အစည်းမှ၊ ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ schedule ရဲ့ sea trial preparation, sea trial ballast condition နဲ့ sea trial full load condition တွေမှာ၊ test items တွေကို စမ်းသတ်ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမနေ့မှာ sea trial preparation အနေနဲ့ starting engine test, departure from shipyard, compass adjustment နဲ့ sea trial position & preparation တို့ကိုဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယနဲ့ တတိယနေ့တွေမှာတော့ sea trial ballast condition အနေနဲ့ engine setting, dead ship condition test, stop inertia test, blackout test, progressive test, crash stop astern test, crash stop ahead test, turning test, Z maneuvering test, main steering gear test, emergency steering gear test, nautical equipment test နဲ့ williamson test တို့ကိုဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။
စတုထ္ထနဲ့ ပဉ္စမမြောက်နေ့တွေမှာတော့ sea trial full load condition အနေနဲ့ engine setting, dead ship condition test, stop inertia test, blackout test, progressive test, crash stop astern test, crash stop ahead test, turning test, Z maneuvering test, main steering gear test, emergency steering gear test, structural tank test, endurance test, noise & vibration test, cargo & ballast test, life saving equipment test နဲ့ arrival at shipyard တို့ကိုဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ဖော်ပြမယ့် အကြောင်းအရာတွေကတော့ '"test item for sea trail" မှာပါဝင်မယ့် အချက်အလက်တွေကို၊ အခြေခံကာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
(၄) - Stop inertia test - သဘေ်ာရဲ့ main engine ကိုရပ်လိုက်ပေမယ့်၊ သဘေ်ာဟာ ဆက်လက်ရွေ့လျှားနေဦးမှာဖြစ်ပြီး၊ main engine ကိုရပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှ ရွှေ့လျှားမှုမရှိတော့ပဲ၊ '0' Knot အနေနဲ့ ရပ်တန့်သွားမယ့် အချိန်နဲ့ အကွာအဝေး time and distance တို့ကို၊ စမ်းသတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ stop inertia test ကိုစမ်းသတ်ရာမှာ main engine အတွက် လောင်စာဆီ fuel oil အဖြစ်၊ bunker "A" လို့ခေါါတဲ့ MGO တနည်းအားဖြင့် marine gas oil ကိုသာအသုံးပြုကာ၊ စမ်းသတ်လေ့ရှိပါတယ်။
main engine မရပ်မှီ၊ သဘေ်ာရဲ့ ရေမိုင်အမြန်နှုံး ship speed, သဘေ်ာရဲ့ ရေမိုင်အမြန်နှုံး5Knot မှ main engine ကိုရပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ၊ ရွှေ့လျှားမှုမရှိတော့ပဲ၊ '0' Knot အနေနဲ့ ရပ်တန့်သွားမယ့် အကွာအဝေး၊ advance distance လို့ခေါါတဲ့ ရွှေ့လျှားမှုမရှိတော့ပဲ၊ '0' Knot အနေနဲ့ ရပ်တန့်သွားပေမယ့်၊ အနည်းငယ်ထပ်မံရွေ့လျှားဦးမယ့် အကွာအဝေး၊ လေတိုက်နှုံးနဲ့ လေကြောင်းရဲ့လားရာ ဦးတည်ဖက် wind speed and wind direction တို့အပြင် sea condition လို့ခေါါတဲ့ ပင်လယ်ပြင်မှလှိုင်းအခြေအနေတို့ကိုပါ၊ ကိုးကား မှတ်တမ်းတင်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
inertia test အပြီးမှာတော့ "Engine response time test" ကိုပါတလက်စတည်း၊ စမ်းသတ်လေ့ ရှိပါတယ်။ engine response time test ကိုစမ်းသတ်ရာမှာ main engine အတွက် လောင်စာဆီ fuel oil အဖြစ်၊ bunker "A" ကိုသာသုံးပြီး၊ ရွှေ့လျှားမှုမရှိတော့ပဲ၊ '0' Knot အနေနဲ့ ရပ်တန့်သွားမယ့် အခြေအနေမှ၊ main engine ကိုပြန်နှိုးကာ အနည်းဆုံး ရေမိုင်အမြန်နှုံး4Knot အထိ၊ ရွှေ့လျှားသွားရန် လိုအပ်မယ့် အချိန်ကို၊ စမ်းသတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
(၆) - Progress speed trial - main engine ရဲ့ လည်ပတ်မှု rpm အမျိုးမျိုးနဲ့ load conditions အမျိုးမျိုးမှာ၊ သဘေ်ာရဲ့ အမြန်နှုံး ship speed နဲ့ engine ရဲ့ ဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်မှု load condition တို့ရဲ့ဆက်သွယ်ချက် relation ကို၊ စမ်းသတ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ progress speed trial မှာ (50 %), (75 %) (90 %) နဲ့ (100 %) load condition ဆိုပြီးခွဲခြားစမ်းသတ်ကာ၊ လည်ပတ်မှု rpm အမျိုးမျိုးမှာ ဖြစ်ပေါါမယ့် LO pressure, LO temperature, cooling fresh water pressure, cooling fresh water temperature, fuel oil pressure, fuel rack position, governor boost air pressure, exhaust temperature, scavenge air pressure နဲ့ turbocharger rpm အစရှိတဲ့ engine ရဲ့ parameter အပြောင်းအလဲတွေကို၊ တိုင်းတာ မှတ်တမ်းတင်ရပါတယ်။
engine ရဲ့ parameter အပြောင်းအလဲတွေကို၊ တိုင်းတာမှတ်တမ်းတင်ရာမှာ အပြောင်းအလဲတွေရဲ့တုန့်ပြန်မှုကြာချိန် response time ကိုပါထည့်သွင်းမှတ်သားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ progress speed trial test ကိုစမ်းသတ်ရာမှာ main engine အတွက် လောင်စာဆီ fuel oil အဖြစ်၊ bunker "C" လို့ခေါါတဲ့ HFO တနည်းအားဖြင့် heavy fuel oil ကိုသာအသုံးပြုကာ၊ စမ်းသတ်လေ့ ရှိပါတယ်။ stop inertia test ကို bunker "A" အသုံးပြုပြီး စမ်းသတ်ကာ၊ progress speed trial test ကိုတော့ bunker "C" အသုံးပြုပြီးစမ်းသတ်တဲ့အတွက်၊ boiler, economizer, purifiers တွေနဲ့ bunker change လို့ခေါါတဲ့ လောင်စာဆီပြောင်းလဲ အသုံးပြုရာမှာ၊ mixing column အပါအဝင် ဆီရဲ့စေးပျစ်မှု viscosity ကိုကျဆင်းသွားစေမယ့် အပူပေးစနစ်တွေကိုပါ၊ စမ်းသတ်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။
(၇) - Crash stop Astern test - main engine ကို Ahead position အနေအထားဖြင့် ရှေ့သို့မောင်းနှင်နေရာမှ အရေးပေါါအခြေအနေမှာ၊ emergency stop အနေနဲ့ရုတ်တရက်ရပ်တန့်ပြီး၊ ရပ်တန့်သွားမယ့် အချိန်နဲ့ အကွာအဝေး time and distance တို့ကို စမ်းသတ်ခြင်းနဲ့ နောက်သို့ Astern position အနေအထားသို့ပြောင်းလဲမောင်းနှင်ရာမှာ engine ရဲ့ လည်ပတ်မှု rpm ဟာ steady အနေအထားဖြင့် တည်ငြိမ်သွားမယ့် အချိန်နဲ့ အကွာအဝေး time and distance တို့ကို စမ်းသတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
main engine ကို Ahead position အနေအထားဖြင့် ရှေ့သို့မောင်းနှင်ရာမှာ speed control handle ကို (90 %) load condition မှာထားရှိကာ၊ MCR ဆိုတဲ့ machine continuous revolution လည်ပတ်မှု rpm အပြည့်ဖြင့်၊ မောင်းနှင်နေပြီး၊ speed control handle ကို (90 %) load condition မှ propeller shaft လည်ပတ်မှုမရှိတော့တဲ့၊ (0 %) load condition သို့ ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ FPP လို့ခေါါတဲ့ fixed pitch propeller ကိုအသုံးပြုပြီး၊4stroke medium speed main engine တတ်ဆင်ထားတဲ့ သဘေ်ာတွေမှာ၊ Ahead position မှ Stop position သို့ပြောင်းလဲတဲ့အခါ၊ engine ကိုလုံးဝ ရပ်တန့်ကာပြောင်းလဲစရာမလိုပဲ၊ reduction gear မှတဆင့် clutch ကို disengage လုပ်ခြင်းဖြင့်သာ propeller shaft လည်ပတ်မှုမရှိတော့တဲ့၊ (0 %) load condition သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ reduction gear မပါပဲ fixed pitch propeller ကိုအသုံးပြုပြီး၊ propeller shaft နဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားကာ2stroke low speed main engine တတ်ဆင်ထားတဲ့ သဘေ်ာတွေမှာတော့ engine ကို လုံးဝ ရပ်တန့်ကာပြောင်းလဲရပါတယ်။
တဖန် (0 %) load condition မှ Astern position အနေအထားဖြင့်၊ speed control handle ကို (90 %) load condition သို့တိုးမြှင့်ပြီး၊ engine ရဲ့ လည်ပတ်မှု rpm ဟာ steady အနေအထားဖြင့် တည်ငြိမ်သွားမယ့် အချိန်အထိ၊ သဘေ်ာကိုနောက်သို့ မောင်းနှင်ပါတယ်။ rpm ဟာ steady အနေအထားဖြင့် တည်ငြိမ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ speed control handle ကို၊ (0 %) load condition သို့၊ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ကာ၊ ရွှေ့လျှားမှု မရှိတော့ပဲ၊ '0' Knot အနေနဲ့ ရပ်တန့်သွားတဲ့အထိ၊ စမ်းသတ်ရပါတယ်။
crash stop Astern test ကိုစမ်းသတ်စဉ် (၁၀) စက္ကန့်အချိန်အကွာအဝေး time interval တိုင်းမှာ၊ speed log မှတဆင့် သဘေ်ာရဲ့ အမြန်နှုံး ship speed ကို၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ (၁၀) စက္ကန့်အချိန် အကွာအဝေး time interval တိုင်းမှာ၊ gyro-compass မှတဆင့် သဘေ်ာရဲ့ ဦးတည်ဖက်လားရာထောင့်ဒီဂရီ heading angle ကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ (၁၀) စက္ကန့်အချိန်အကွာအဝေး time interval တိုင်းမှာ propeller shaft ရဲ့ လည်ပတ်မှု rpm ကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနဲ့ crash stop Astern test ကိုစတင်စမ်းသတ်စဉ်မှာ ရှိနေမယ့် လေကြောင်းရဲ့လားရာဦးတည်ဖက် wind speed and wind direction၊ sea condition လို့ခေါါတဲ့ ပင်လယ်ပြင်မှ လှိုင်းအခြေအနေ၊ weather sea state လို့ခေါါတဲ့ ပင်လယ်ပြင်မှ ရာသီဥတု အခြေအနေနဲ့ sea depth လို့ခေါါတဲ့ ပင်လယ်ရေအနက် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းတို့ကို၊ ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။
(၈) - Crash stop Ahead test - main engine ကို Astern position အနေအထားဖြင့် နောက်သို့မောင်းနှင်နေရာမှ အရေးပေါါအခြေအနေမှာ၊ emergency stop အနေနဲ့ရုတ်တရက်ရပ်တန့်ပြီး၊ ရပ်တန့်သွားမယ့် အချိန်နဲ့ အကွာအဝေး time and distance တို့ကို စမ်းသတ်ခြင်းနဲ့ ရှေ့သို့ Ahead position အနေအထားသို့ပြောင်းလဲမောင်းနှင်ရာမှာ engine ရဲ့ လည်ပတ်မှု rpm ဟာ steady အနေအထားဖြင့် တည်ငြိမ်သွားမယ့် အချိန်နဲ့ အကွာအဝေး time and distance တို့ကို စမ်းသတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ crash stop Ahead test ကိုစမ်းသတ်ရာမှာ၊ crash stop Astern test စမ်းသတ်တဲ့နည်းစဉ် procedure တွေအတိုင်းဆောင်ရွက်ပါတယ်။
(၉) - Anchoring test - သဘေ်ာမှာတတ်ဆင်ထားတဲ့ windlass ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် performance ကိုစမ်းသတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ anchoring test ကို deep water လို့ခေါါတဲ့ ရေနက်ပိုင်းတွေမှာဆောင်ရွက်လေ့ ရှိပြီး၊ စမ်းသတ်ခြင်းကို မဆောင်ရွက်မှီ ရွှေ့လျှားမှုမရှိတဲ့ stand still position ဖြင့် လေတိုက်ရာဖက်ကို headed into the wind အနေနဲ့ ဦးတည်ထားရပါတယ်။ anchoring test မှာ loading test နဲ့ chain drum brake test တို့ပါဝင်ပါတယ်။ loading test မှာ3fathoms လို့ခေါါတဲ့ ကျောက်ကြိုး (၃) ဆစ် တနည်းအားဖြင့် (၈၂. ၅) မီတာအထိရေထဲကို နှစ်ထားပြီးမှ၊ ကျောက်မတင်ခြင်း having up anchor အနေနဲ့ စမ်းသတ်ပါတယ်။ having up anchor အနေနဲ့ စမ်းသတ်စဉ် hoisting speed ဆိုတဲ့ ကျောက်ကြိုးရစ်တင်နိုင်မှု အချိန်အတိုင်းအတာကို၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအား၊ ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ ကျောက်ကြိုး anchor chain တဆစ်ဟာ chain diameter လို့ခေါါတဲ့ chain ရဲ့ အချင်းဝက်ပေါါမူတည်ပြီး၊ (၂၂. ၅) မီတာမှ (၂၇. ၅) မီတာအလျှား ရှိပါတယ်။ ကျောက်ကြိုးအဆစ်တခုနဲ့ တခုကို kenter shackle သို့မဟုတ် D shackle တွေကိုအသုံးပြုကာ၊ ဆက်ထားပါတယ်။ chain drum brake test ကိုတော့ dropping anchor အနေနဲ့ ကျောက်ချစဉ် 1/2 fathoms လို့ခေါါတဲ့ ကျောက်ကြိုးဆစ်တဝက်ချပြီးတိုင်း၊ brake ဖမ်းကာ safe paying out and holding of the anchor chain အဖြစ်စမ်းသတ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာကြုံတုန်း mooring winches တွေရဲ့ brake holding test နဲ့ brake rendering test အကြောင်းလေးကိုပါ၊ ထည့်သွင်းပြောပါရစေ။ mooring winches တွေရဲ့ brake holding test နဲ့ brake rendering test တို့ကိုတော့ သဘေ်ာကျင်းမှာဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ tanker သဘေ်ာတွေမှာတော့ terminal requirement ဆိုတဲ့ ရေနံချက်စက်ရုံတွေမှာ ကုန်တင်ခွင့်နဲ့ ကုန်ချခွင့်ရဖို့ mooring winches တွေရဲ့ brake holding test နဲ့ brake rendering test တို့ကို (၁) နှစ်တခါဆောင်ရွက် စစ်ဆေးရန်၊ လိုပါတယ်။ mooring winches တွေရဲ့ brake holding နဲ့ brake rendering capacity ကို၊ အသုံးပြုထားတဲ့ mooring rope ရဲ့ MBL လို့ခေါါတဲ့ minimum breaking load အပေါါမူတည်ပြီး၊ တွက်ချက်ပါတယ်။ brake holding capacity ဟာ mooring rope ရဲ့ minimum breaking load (၇၀ %) မှ (၈၀ %) ရှိရန်လိုအပ်ပြီး၊ brake rendering capacity ကတော့ minimum breaking load (၆၀ %) ရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်။
Fig. Marina maxi 8 standard, 8 inch circumference polyster & polypropylene mooring rope
သဘေ်ာတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ mooring rope တွေကို steel wire, IWRC wire, fibre core wire, high resistance modulus fibre aramid LCP & HMPE wire, polyster rope, polypropylene rope, mixed polyster & polypropylene rope, polyamide rope, polyamide double braid rope, polyster, polypropylene & mixed polyamide rope နဲ့ polyamide rope ဆိုပြီး၊ အသုံးပြုထားတဲ့ material အမျိုးအစားအလိုက်၊ ခွဲခြားထားပါတယ်။ load extension characteristics အရ polyamide rope ဟာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ elasticity နဲ့ strength အကောင်းဆုံးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ရေနံတင် သဘေ်ာတွေမှာတော့ အနိမ့်ဆုံး polypropylene mooring rope ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် fire wire အနေနဲ့ IWRC လို့ခေါါတဲ့ independent wire rope core ကိုသာအသုံးပြုရပါတယ်။
Fig. IWTC fire wire and double bitt bollard
fire wire ဆိုတာကတော့ ဆိပ်ကမ်းမှာကပ်ထားစဉ် ဒါမှမဟုတ် ရေနံချက်စက်ရုံမှာကပ်ထားစဉ်၊ သဘေ်ာ မီးလောင်တဲ့အခါ ဆွဲသဘေ်ာ၊ တွန်းသဘေ်ာ tug boat ဖြင့်ဆွဲထုတ်ရာမှာ အသုံးပြုရမယ့် galvanized stee wire ropes တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သဘေ်ာတည်ဆောက်သူ shipbuilder မှ မူလသဘောတူညီချက် building contract agreement အရ၊ mooring ropes တွေနဲ့ fire wire တွေကိုထည့်သွင်းပေးသလို၊ တခါတရံ building contract agreement မှာမပါဝင်တဲ့အတွက်၊ မထည့်သွင်းပဲချန်ထားနိုင်ပါတယ်။ building contract agreement ချုပ်ဆိုကတည်းက၊ အသုံးပြုရန်အမျိုးအစားမှန်ကန်တဲ့ mooring ropes တွေနဲ့ fire wire တွေကို ထည့်သွင်းပေးရန် တိကျစွာရေးသားထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
လိုအပ်မယ်ထင်လို့ "mooring winch" အကြောင်း၊ သိသလောက်လေးဖော်ပြပါရစေ။ mooring system ဟာ သဘေ်ာကို၊ berth အနေနဲ့ ဆိပ်ကမ်းမှာကပ်ထားစဉ်၊ holds the ship in position အဖြစ်နေရာ အတည်တကျ ရရှိနေစေကာ၊ ရေစီး current နဲ့ ဒီရေ tide တို့နဲ့အတူ၊ သဘေ်ာမျောပါရွှေ့လျှားသွားခြင်း drifting away မဖြစ်ပေါါစေဖို့၊ တားဆီး ကာကွယ်ထားတဲ့ စနစ်တခုဖြစ်ပါတယ်။ mooring winches တွေဟာ mooring system တခုလုံးအတွက် အရေးပါတဲ့ integral part အစိတ်အပိုင်းတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Mooring winch
Fig. Mooring winch clutch
shipboard end of mooring lines အနေနဲ့ သဘေ်ာကို ရွှေ့လျှားလှုပ်ရှားမှုမဖြစ်ပေါါစေရန် secure အနေနဲ့ချည်နှောင်ထားခြင်းနဲ့ changes in draft and tide ဆိုတဲ့ ရေစူးနဲ့ ဒီရေအပြောင်းအလဲမှာ၊ ချည်နှောင်ထားပုံ mooring pattern တွေကို လိုအပ်သလို၊ adjustment of the mooring line length အဖြစ် လိုက်ပါချိန်ညှိပေးခြင်း အစရှိတဲ့၊ စွမ်းဆောင်ရည်အမျိုးမျိုးတို့ကို၊ multitude functions အဖြစ်၊ mooring winches တွေမှဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
mooring winches တွေရဲ့ mooring pattern ထိန်းချုပ်ပုံ control type တွေအပေါါမူတည်ပြီး၊ automatic နဲ့ manual tension ဆိုပြီး ခွဲခြားသတ်မှတ်သလို၊ မောင်းနှင်ပုံ drive type တွေအပေါါ မူတည်ပြီး၊ steam, hydraulic နဲ့ electric ဆိုပြီး ခွဲခြားသတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တတ်ဆင်ထားတဲ့ wrapping drum, storage drum နဲ့ tension drum အရည်အတွက်အရ single drum, double drum နဲ့ triple drum ဆိုပြီးခွဲခြားသလို၊ type of drum ဆိုတဲ့ drum အမျိုးအစားအလိုက် split နဲ့ undivided ဆိုပြီး ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ mooring winches တွေမှာ တတ်ဆင်အသုံးပြုတဲ့ brake type & brake applications တွေကိုတော့ band, disc, mechanical screw နဲ့ spring applied ဆိုပြီး ခွဲခြား သတ်မှတ်ပါတယ်။ အလားတူပဲ mooring winches တွေကိုမောင်းနှင်မယ့် gear case type ကိုတော့ open နဲ့ closed-half filled with oil ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
Gear backlash measurement - mooring winch တွေကိုမောင်းနှင်မယ့် gear wheel ကို hydraulic motor ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားပြီး၊ gear wheel နဲ့ pinion တို့ကြားမှ ထိတွေ့မှု contact အကွာအဝေး gap တနည်းအားဖြင့် backlash ကိုတိုင်းတာလေ့ ရှိကြပါတယ်။ mooring winch တွေကိုမောင်းနှင်မယ့် gear wheel ကို hydraulic motor ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားပြီး၊ gear wheel နဲ့ pinion တို့ကြားမှ ထိတွေ့မှု contact အကွာအဝေး gap တနည်းအားဖြင့် backlash ကိုတိုင်းတာလေ့ရှိကြပါတယ်။
Fig. Gear backlash measurement
solder wire ကို pinion wheel နဲ့ pinion တို့ကြားမှာတင်ပြီး၊ winch ကိုတပါတ်လည်အောင် မောင်းနှင် လိုက်တဲ့အခါ၊ solder wire ဟာ flattened အနေနဲ့ 'ပြား' သွားပါတယ်။ 'ပြား' သွားတဲ့ solder wire ရဲ့အထူ thickness ကိုတိုင်းတာခြင်းဖြင့် gear wheel နဲ့ pinion တို့ကြားမှ ထိတွေ့မှု contact အကွာအဝေး 'backlash' ကိုရရှိလာပြီး၊ winch မူလထုတ်လုပ်စဉ်တုန်းက သတ်မှတ်ထားတဲ့ design specification နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရပါတယ်။
Load measurement - mooring winch တွေထုတ်လုပ်စဉ်တုန်းက design specification အရ၊ ထမ်းဆောင်နိုင်မယ့် ဝန် load ပမာဏကို သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ mooring winch ရဲ့ ထမ်းဆောင်နိုင်မယ့် 'ဝန်' ကို စစ်ဆေးခြင်း load checking (F) ကို၊ အလေးချိန် weights ရှိတဲ့ အရာဝထ္ထုတခုခု (W) အား wire rope ဖြင့်ဆက်သွယ်ပြီး၊ ဒေါင်လိုက်အနေအထား lifted vertically ဆွဲယူခြင်းဖြင့်ဆောင်ရွက်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ winch အပေါါသက်ရောက်မယ့် total load ကို တွက်ချက်ရာမှာ winch မှ sheave လို့ခေါါပြီး၊ wire rope သို့မဟုတ် mooring rope ရဲ့ အဆုံးသတ်အစ end ကိုဖမ်းထားမယ့် drum တွေရဲ့ efficiency 'η ' ကိုလည်း၊ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ဖို့ လိုပါတယ်။ အပေါါပုံမှာဖော်ပြထားတဲ့ winch မှာ warping drum, storage drum နဲ့ tension drum ဆိုပြီး၊ sheave အရည်အတွက် (၃) ခုပါဝင်တဲ့အတွက် "F = W / η³ " (η = 0.98) ဆိုတဲ့၊ ပုံသေနည်းကို အသုံးပြုပါတယ်။
Fig. Mooring winch speed test
Speed measurement - winch ရဲ့ speed ကိုစမ်းသတ်ရာမှာလည်း၊ design specification အရ၊ သတ်မှတ်တွက်ချက်ထားတဲ့ ထမ်းဆောင်နိုင်မယ့် 'ဝန်' အလေးချိန်ကို wire rope မှ ဒေါင်လိုက် အနေအထား lifted vertically ဆွဲယူခြင်းဖြင့်ဆောင်ရွက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ wire rope ရဲ့ (၂) မီတာအကွာအဝေးနေရာမှာ အမှတ် marking (၂) ခု မှတ်သားထားပြီး၊ rod တချောင်းကို ဒေါင်လိုက် အနေအထားဖြင့် wire rope အနီးမှာထောင်ထားရပါတယ်။ winch မှ load ကိုဆွဲယူတဲ့အခါ၊ wire rope ပေါါမှ ပထမအမှတ် rod ကိုဖြတ်သွားမယ့် အချိန်နဲ့ ဒုတိယအမှတ် rod ကို ဖြတ်သွားမယ့် အချိန်တို့ကို၊ မှတ်သားရယူပြီး၊ ပထမအမှတ်နဲ့ ဒုတိယအမှတ်တို့ကြားမှ အချိန်အကွာအဝေး စက္ကန့် (T) ကို အခြေခံကာ၊ "Speed = 120/ T" ဆိုတဲ့ပုံသေနည်းမှတဆင့်၊ rpm ဆိုတဲ့ တမိနစ်လည်ပတ်နှုံးအား တွက်ယူပါတယ်။
Fig. Mooring winch speed measurement
winches တွေရဲ့ speed ဟာ၊ loaded condition နဲ့ no-load condition ဆိုပြီး၊ ထမ်းဆောင်ရမယ့် ဝန်ပမာဏ အနည်းအများပေါါမူတည်ပြီး၊ ကွာခြားမှုရှိပါတယ်။ heaving လို့ခေါါတဲ့ mooring rope ကို ဆွဲယူတဲ့ speed နဲ့ heaving မှာပဲ mooring rope မပါပဲ၊ no-load condition အနေနဲ့ လည်ပတ်တဲ့ speed တို့ဟာ မတူညီနိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အလားတူပဲ payout လို့ခေါါတဲ့ mooring rope ကို အပြင်သို့ လျှော့ထုတ်တဲ့ speed နဲ့ payout မှာပဲ mooring rope မပါပဲ၊ no-load condition အနေနဲ့ လည်ပတ်တဲ့ speed တို့ဟာ မတူညီနိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ winches တွေရဲ့ speed အမျိုးမျိုးကို တွက်ယူရာမှာ၊ 'rpm gauge' ကိုအသုံးပြုပြီး၊ warping drum မှတဆင့် တိုင်းတာကြတာလည်း ရှိပါတယ်။
Brake holding measurement - mooring ropes တွေကို ဝယ်ယူကတည်းက၊ classification society အဖွဲ့အစည်းတခုခုမှ စမ်းသတ်အတည်ပြုပေးတဲ့ certificate လက်မှတ်ပါ၊ တပါတည်း ပါဝင်ပါတယ်။ certificate မှာ mooring rope နဲ့ ပက်သက်တဲ့ အချက်အလက် specifications တွေကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပြီး၊ အသုံးပြုမယ့် mooring rope ရဲ့ MBL လို့ခေါါတဲ့ minimum breaking load တန်ဘိုးပမာဏလည်း၊ ပါဝင်ပါတယ်။ mooring rope ရဲ့ လုံးပတ်အရွယ်အစား circumference အတိုင်းအတာပေါါမူတည်ပြီး၊ MBL တန်ဖိုးပမာဏ အနည်းအများကွာခြားမှုရှိပါတယ်။
Fig. Mooring winch brake testing
mooring winches တွေရဲ့ brake holding capacity နဲ့ brake rendering capacity ကို အသုံးပြုမယ့် mooring rope ရဲ့ minimum breaking load တန်ဘိုးပမာဏအပေါါမူတည်ပြီး၊ တွက်ချက်သလို (၁) နှစ် တခါ စမ်းသတ်ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ brake testing kit ကိုပါ သဘေ်ာတွေပေါါမှာဆောင်ထားလေ့ ရှိပါတယ်။ brake testing ကိုဆောင်ရွက်ရာမှာ mooring rope ကိုအသုံးမပြုပဲ၊ brake testing kit မှ hydraulic jack ကိုအသုံးပြုကာ၊ hydraulic pressure ဖိအားဖြင့် စမ်းသတ်ကြပါတယ်။ အသုံးပြုရမယ့် hydraulic pressure ဖိအားပမာဏတွက်ချက်ပုံကို၊ ဖော်ပြပါဦးမယ်။
brake holding capacity ဟာ mooring rope ရဲ့ minimum breaking load (၇၀ %) မှ (၈၀ %) ရှိရန်လိုအပ်ပြီး၊ brake rendering capacity ကတော့ minimum breaking load (၆၀ %) ရှိရန် လိုအပ်ပါတယ်။
mooring winch တလုံးအတွက်လိုအပ်မယ့် brake torque တန်ဖိုးပမာဏကို၊ "Tb = Po x Rpcd / 2" ဆိုတဲ့ပုံသေနည်းဖြင့် တွက်ယူနိုင်ပြီး၊ ရရှိလာမယ့် unit က ton. cm ဖြစ်ပါတယ်။ 'Po' ဟာ brake holding capacity တန်ဖိုး (ton) ဖြစ်ပြီး၊ mooring rope ရဲ့ MBL တန်ဖိုးမှရယူပါတယ်။ mooring rope ရဲ့ PCD ကိုတော့ "Rpcd = Dd + Dr" ဆိုတဲ့ပုံသေနည်းမှရယူပြီး၊ 'Dd' ဟာ mooring winch ရဲ့ drum diameter (cm) ဖြစ်ကာ၊ 'Dr' ကတော့ mooring rope ရဲ့ diameter (cm) ဖြစ်ပါတယ်။ hydraulic jack အပေါါ သက်ရောက်မယ့် force ကိုတော့ "F = Tb / L" ဆိုတဲ့ ပုံသေနည်းဖြင့်တွက်ယူကာ၊ (kg) unit ဖြင့် ရယူပါတယ်။
'L' ဟာ test force moment arm ရဲ့ အလျှား (cm) ဖြစ်ပြီး၊ mooring winch ရဲ့ drum center အလယ်ဗဟိုမှ၊ hydraulic jack အထိုင်ရဲ့ center အလယ်ဗဟိုအကွာအဝေး ဖြစ်ပါတယ်။ hydraulic jack ထောက်ထားမယ့် ဧရိယာ 'A' ကို effective area of hydraulic jack လို့သတ်မှတ်ပြီး၊ unit ကတော့ square cm ဖြစ်ပါတယ်။ hydraulic jack အပေါါသက်ရောက်မယ့် force 'F' တန်ဖိုးနဲ့ hydraulic jack ထောက်ထားမယ့် ဧရိယာ effective area of hydraulic jack 'A' တို့ရဲ့ တန်ဖိုးတွေကို ရရှိလာတဲ့ အခါ၊ "P = F / A" ဆိုတဲ့ ပုံသေနည်းကိုအသုံးပြုပြီး၊ mooring rope ရဲ့ 80 % MBL တန်ဖိုးအတွက်၊ brake holding test မှာအသုံးပြုရမယ့် hydraulic pressure ဖိအားပမာဏကို၊ ကြိုတင်တွက်ယူကာ စမ်းသတ်ကြပါတယ်။
Reference : M.T Vanda / N. 06599, PMS 2228 - 6/ BV 09723 V Sea Trial Record, 12th November, 2008. PT Dok Dan Perkapalan, Surabaya (PERSORO), Indonesia. Mooring Equipment Guide Line,3rd Edition, ISBN 978 1 905331 321, OCIMF, http://www.marinewiki.org/,
Posted by ကိုထွန်း at 01:03
Aung Htut9December 2012 at 07:58
Sea Trail အပိုင်း ၂ ကို ဖတ်သွားပါတယ် အကိုရေ......
Marine Engineers လူကြီး..လူငယ်..အားလုံးအတွက်..ဗဟုသုတ..ဖြစ်စေတဲ့ လက်တွေ့..ဆောင်းပါးများပါ..။ ဆက်ရေးပါ..။ ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်..။